Ungazenza njani iwijethi ze desktop kwi Windows 10 | Iindaba zeGajethi
Uyifumana njani iwijethi zedesktop kwakhona Windows 10
Enye yezinto ezilungileyo ezinokuthi zenzeke kwiWindows Vista yile ukongezwa kweewijethi zedesktop. Ngaphandle koko asinakuthetha nto incinci malunga nale nkqubo ikwazileyo ukwenza ukuba abasebenzisi abaninzi bakhumbule iMicrosoft ngaphandle kweenjongo ezintle.
KwiWindows 8 zisandula kususwa, kwaye kwiWindows 10 entsha asikabi nazo. Ke kubonakala ngathi asizukubakho kwixesha elizayo, nangona kunjalo kunokwenzeka ngeapp esinokuyifaka kwikhompyuter yethu.
Ke siza kuba neewijethi ngaphakathi Windows 10 kwakhona, nangona xa ufaka ezinye iiwijethi kufuneka ulumke kancinci ngento ekhutshelweyo.
1 Ungazifumana njani iiwijethi kwakhona Windows 10
2 Olunye ukhetho: 8GadgetPack
Ungazifumana njani iiwijethi kwakhona Windows 10
Into yokuqala ukufaka i-Desktop Gadgets Installer
Sikhupha ifayile ye-zip kwaye silandela imiyalelo eskrinini ukufaka le nkqubo
Xa siyifakile isicelo, cofa ekunene kwidesktop
Ngoku i Ukhetho "lweegajethi" kwimenyu yokuma. Siyikhetha
Kwiskrini esiza kuvela siya kukhetho «Khuphela izixhobo ezininzi kwi-intanethi». Sikwenza oku kuba iMicrosoft ivale iiseva apho iiwijethi eziphambili zithatha khona olo lwazi
Unako ukufikelela Kule phepha ukufikelela kwiiwijethi ezingaphezulu
Olunye ukhetho: 8GadgetPack
8Isixhobo yayenzelwe iWindows 8 kuqala kodwa kunjalo iyahambelana nayo Windows 10. Emva kofakelo, iya kongezwa kwimenyu yomxholo njengakwisicelo sangaphambili. Ukuba uyifakile, iya kuyifaka endaweni yayo nge-8Gadget.
I-8Gadget inayo Amawijethi angama-45 ke uya kuba noluhlu olulungileyo lokwanelisa iimfuno zakho zeewijethi kwiWindows 10. Phakathi kwezinye zeempawu onokuzandisa ubungakanani beewijethi.
Iinketho ezimbini zokubuyisa iiwijethi kwakhona Windows 10 njalo njalo ixesha lokufikelela kwidesktop nangona sele sinayo kwimenyu yokuqala. Kwaye, ukuba ngasiphi na isizathu ufuna intsholongwane yale nkqubo yokusebenza yiza ngapha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Uyifumana njani iwijethi zedesktop kwakhona Windows 10
I-UE BOOM isithethi esidityanisiweyo nesilungileyo esinombala ophathwayo weBluetooth
Fumana ii-smartphones ze-Android ngokuzimela okukhulu kwintengiso